Maka: ukuqokelelwa kwedatha | Martech Zone
Maka: ukuqokelelwa kwedatha
NgoLwesine, Julayi 23, 2020 NgoLwesihlanu, Meyi 21, 2021 Douglas Karr
Njengokuba izixhobo ezingaphezulu nangaphezulu zikwindawo yakho yokuthengisa kunye nokuthengisa, ukuvelisa iingxelo ezisisiseko kunokuba ngumsebenzi. Uninzi lwabathengisi endibaziyo bachitha ixesha elininzi lokuqokelela kunye nokuguqula idatha, emva koko bavelise ngesandla iingxelo abazifunayo ukunika ingxelo ngephulo kunye nezinye iindlela zokuthengisa. Umsebenzi: Ukudityaniswa kwemithombo yedatha engaphezulu kwama-500 I-Funnel ithatha idatha ecekeceke, ethunyelwe kuyo yonke imithombo ukuze ivelise ngokuzenzekelayo idatha yeShishini-ekuLungeleyo ehambelana ngokupheleleyo, ehlaziyiweyo, kunye
Ukuncitshiswa okunamandla kokufumaneka kwedatha yomntu wesithathu kuthetha ukuba kunokwenzeka amathuba okujolisa ekuziphatheni kunye nokwehla kwingeniso yentengiso kubanini beendaba abaninzi. Ukucima ilahleko, abapapashi kufuneka bacinge ngeendlela ezintsha zokusondela kwidatha yomsebenzisi. Ukuqesha iqonga lolawulo lwedatha kunokuba yindlela yokuphuma. Kule minyaka mibini izayo, intengiso yentengiso iza kukhupha ikuki yomntu wesithathu, eya kuguqula imodeli yendabuko yabasebenzisi ekujoliswe kubo, ukulawula iindawo zentengiso,
Iphepha lePhepha lenza ukuba nabani na enze iifom ezikwi-Intanethi okanye iphepha lemveliso ngokukhawuleza, ngokungenantandabuzo, kunye nokufaka uphawu kubo njengoko bethanda-zonke ngaphandle kokubhala ikhowudi. Iifom zakho zilula kubathengi bakho nakuluntu ukuba zizalise kwiselfowuni okanye kwidesktop kuba ziphendula ngokupheleleyo. Ifomathi yamaphepha ibandakanya ukubanakho ukupapasha iifom ezingenamda, ukuvumela ukuba uzingene kwindawo yakho, ukuvumela ukuba udibane neStripe yeentlawulo, okanye ukutyhala idatha yakho ngeZapier. Unokukhetha eyakho
IBrightTag, iqonga lokuthengisa elisekwe kwilifu kubathengisi be-Intanethi, ithengile iSignal. Umqondiso yindawo yokuthengisa esembindini yentengiso yesitayile esinqamlezileyo nge-imeyile, iSMS kunye nemidiya yoluntu. Iimpawu zomqondiso zibandakanya: Iileta zeendaba ze-imeyile- ezakhelwe kwangaphambili, iitemplate zeimeyile ezilungiselelwe ukuhamba ukuze uzisebenzise okanye uzenzele ezakho. Umyalezo obhaliweyo-yazisa ngenkqubo esebenzayo kwaye uhambelane neemfuno zesiphatho esiphathwayo. Ukupapashwa kwemithombo yeendaba kwezentlalo-papasha ubume bakho kuFacebook nakuTwitter, usebenzisa ii-URLs ezimfutshane ukulandelela umxholo wakho.